Sekungaphezu kwamandla okwesiteleka sasePhayindane –Dhlomo | Eyethu News
Sekungaphezu kwamandla okwesiteleka sasePhayindane –Dhlomo
“Bafuna ukunyuselwa iholo libe u-R25 000 lisuka ku-R19 000.”
Abasebenzi bebebhikisha kanje ngaphandle kwamasango aseChild And Youth Care Centre (CYCC) ePhayindane ngoMsombuluko. Isithombe: Zama Mathonsi.
ALUKAKAZIWA usuku okuzoqalwa ngalo ukusebenza eChild And Youth Care Centre ( Place of Safety) ePhayindane kulandela ukuvalwa kwayo ngoMsombuluko ngenxa yabasebenzi abebetelekele amaholo.
Lesi siteleka sidalwa wukunganeliswa kwabasebenzi ngamaholo aloMnyango eNingizimu Afrika yonke yize befunde ngokulinganayo futhi benza umsebenzi ofanayo.
Okhulumela abasebenzi uMnuz Bheki Sibiya uthe abasebenzi bafuna ukuthi osonhlalakahle bahole imali elinganayo okuyi-R25 000 kuzo zonke izifundazwe njengoba KwaZulu-Natal behola uR19 000.
Uqhubeke ngokuthi abahlanza lendawo kufanele baholelwe u-R5000. Ukuvalwa kwalesi sikhungo kulandele ukubulawa kwesisebenzi ebesisebenza ngesikhathi kutelekilwe uMnuz Meshach Ntshangase, nokusolakala ukuthi ubulawe yiziboshwa ngenhloso yokuthi zeqe nokumanje ezingakatholakali.
UMnuz Sibiya uqhube wathi : “Kwizifundazwe eziyi- 9 abasebenzi abaholelwa imali elinganayo. KwaZulu-Natal uDepartment of Social Development (DSD) yiwona oholelwa imali encane kunezinye izifundazwe. Thina sifuna iholo losonhlalakahle linyukele kwisigaba sesi- 8 lapho bezothola khona imali eyizi-R 25 000 bese kuzothi laba abahlanza lendawo bahole R5 000.” kubeka Mnuz Sibiya.
Uphethe ngokuthi abazi lutho ngokwenzeke ngaphakathi ngesikhathi kuhlaselwa uMnuz Ntshangase, uqhube ngokuthi bona bebeteleka ngaphandle kusukela ngo -6 ekuseni ngoMsombuluko.
Obambe njengoNgqongqoshe woMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natali uDkt Sibongiseni Dhlomo usigxeke kakhulu isiteleka sabasebenzi abangaphansi kwenhlangano iNational Education And Health Workers Union (Nehawu) abasebenzela lomnyango.
“’Isiteleka sabasebenzi be(CYCC) singaphezulu kwethu ngoba asenzeki kwisifunda kuphela kodwa inkinga kazwelonke,singuMnyango asihambisani nesiteleka esinodlame futhi abantu kumele bangaphoqi abanye abasebenzi kuthi basingenele uma bengathandi.”
“Ukuvulwa kwesikhungo esisePhayindane akulele kuthina ngoba vele sivalwe-nje ngoba abasebenzi bengekho betelekile kodwa uma bengabuya singavulwa noma yinini,” kubeka uNgqongqoshe Dhlomo.
Okhulumela lomnyango uNkk Ncumisa Ndelu uthe kusenzima ukuqagula ukuthi sizovulwa nini isikhungo sasePhayindane.
UWarrant Officer Mazwi Maphumulo wamaphoyisa asePhayindane uthe namanje akukaboshwa muntu, amaphoyisa asaphenya.
Siza ukuthola uMkhize